Wasiirada ka Tirsan Xukuumadda oo Maanta Booqasho ku Tegay Dekadda Caalamiga Muqdisho...
Wasiirada Maaliyadda iyo Ganacsiga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta..
Date: 2012-01-12 05:36:18
Wasiirada Maaliyadda iyo Ganacsiga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta Booqasho hawleed ku tegay Dekadda weyn ee caalamiga ah ee magaalada Muqdisho.
Wasiiradan ayaa sida la sheegey waxa ay u kuur galayaan hanaanka shaqo ee Dekadda iyo waliba wax ka ogaanshaha dakhliga ka soo xarooda Dekadda caalamiga oo ay labadaas wasaaradood si toos ah ay u wada shaqeeyaan.
Wasiirada ayaa iminka waxa ay gudaha dekadda Caalamiga ee magaalada Muqdisho wada hadalo kula leeyihiin Mas’uuliyiinta Dekadda Shaqaalaha iyo Ciidamada halkaa ka hawl gala.
Wasiiradna ayaa la sheegey in ay xog ka ururinayaan Maamulka Dekadda iyo Shaqaalaha taasoo wax lagaga ogaanayo Dhaqaalaha ka soo Xarooda Dekadda Muqdisho oo ah meelaha ugu badan oo ay Dawladda Federaalka Dhaqaalaha ka hesho.
Dekadda Muqdisho ayaa waayadii danbaba waxa ka jiray Muran u dhaxeeyay maamulka iyo Shaqaalaha iyadoona inta badan lagu Eedeeyo in halkaasi ay ku badan tahay wax is daba marsiin.
Dhawaan ayay ahayd markii wasaaradda gaadiidka Badda iyo Dekadaha ay shaqo ka fariisin ku samaysey Sarkaal ka tirsanaa hawl wadeenada dekadda ka gadaal markii lagu Eedeeyay wax is daba marin iyo Musuq maasuq baahay.
Tan iyo markii Dekadda Muqdisho ay dib u bilowdey hawlaheeda isla markaana Dawladda Federaalka ay gacanta ku qabatay Dekadaas ayaa waxaa soo baxayay Eedeeymo iyo cabshooyin ka soo yeerayay Shaqaalaha muruq maalka ah ee halkaa ka xoogsada.
Shaqaalaha ayaa inta badan ka cowda maamul xumo ay ku sameeyeen Mas’uuliyiinta Dekadda sidoo kale waxaa marar badan cabasho ka timid Ganacsatada kuwaasoo ka cowda Maamulka Dekadda.
Si kastaba booqashada Xubnahan Golaha wasiirada ay maanta ku tageen halkaas ayaa waxaa wax la iska weeydiinayaa waxa ay ka bedeleyso maamul xumadii la sheegay in ay la degtay Dekadda caalamiga ah ee magaalada Muqdisho.